अगामी माघ ४ र ५ गते नेपाल चिकित्सक संघ, कोशी अञ्चल शाखाको नयाँ नेतृत्वका लागि चुनाव हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । चुनावका लागि पुस २७ र २८ गते उम्मेदवार मनोनयन पत्र दर्ता हुने भनिएको छ । तर सो भन्दा अगाडि नै चुनावी प्रक्रियाका लागि २६ जना चिकित्सकसहरु २ समूह बनाएर भोटको अपील गरिरहेका छन् । यसले चुनावी प्रक्रियाको निश्चितता दिएको छ ।
चिकित्सक पेशा आफैंमा निकै व्यस्त पेशा हो । अधिकांश चिकित्सकहरु बिहान ८ देखि नै काममा खटिने गरेको हुन्छ । राति निकै अबेरसम्म काममा रहनु, सार्वजानिक विदामा पनि अस्पतालमा पुग्नुपर्ने र लामो समय विदा बस्न नमिल्ने एउटा जिम्मेवार पेशा हो । समाजले चिकित्सकहरु पैसाको पछि कुदेको भने तापनि चिकित्सक आफ्नो चिकित्सकीय जिम्मेवारी पुरा गर्न घर(परिवार, साथिभाई अनि समाजका लागि धेरै समय दिन सकेका हुदैनन् । आधा उमेर पढाईमा र आधा उमेर जिम्मेवारीले थिचिएका चिकित्सकहरुको जिवनमा क्यालेन्डरहरु बदलिन्छन् तर काम र कार्यतालिका बदलिँदैनन् ।
आफ्नो कार्य व्यस्ताका कारण आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक जिम्मेवारी राम्ररी पुरा गर्न असहज हुने गरेको चिकित्सकहरु थप जिम्मेवारी लिन नखोज्नु स्वभाविक नै हो । त्यसैले समाजिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा अनि नेतृत्वका क्षेत्रमा चिकित्सकहरुको उपस्थिति र सहभागिता न्यून हुने गरेको थियो । चिकित्सक संघमा पनि मनोनयन गर्नु पर्ने भन्दा पनि आग्रह गरेर नेतृत्व दिनुपर्ने आवश्यक्ता थियो ।
समयले कोल्टो फेरेको छ । अहिले अधिकांश चिकित्सकहरुले समय व्यवस्थापन गर्दै चिकित्सकीय जिम्मेवारी सँगसँगै समाजिक जिम्मेवारीमा पनि अग्रसर भएको पाईन्छ । समाजिक कार्यहरु, संघसंस्था तथा अन्य नेतृत्वकारी भूमिकामा चिकित्सकहरु देखिन थालेका छन् । पेशागत हककितका लागि तथा अहिले समयसँगै थपिएका चुनौतीहरुलाई चिर्न स्वेमसेवक भई ३ वर्ष चिकित्सक संघको पदाधिकारीको हैसियतले काम गर्छु भन्ने बाचाका साथ २६ जना चिकित्सकहरु तयार हुनु भनेको चिकित्सकहरुका लागि गर्वको कुरा हो । चिकित्सकहरुको यो कदमलाई सम्मान गरिनु पर्छ ।
यस पटक चुनावी मैदानमा उत्रिएका दुवै समूह राजनीतिक समूहका रुपमा नहुनु, दुवै समुहले आफ्नो नेतृत्वको प्रतिबद्धता लिएर आउनु र दुवै समूहले पेशागत हकहित, दायित्व र जिम्मेवारीसँगै श्रमशोषण, अवसर, दक्षता अभिबृद्धि जस्ता मुद्दाहरु अगाडि बढाउनुले साँच्चै नै अबको चिकित्सक संघको नयाँ नेतृत्वले संघलाई सकारात्मक दिशा तर्फ राम्रो गतिमा बढाउने आशा थपेको देखिन्छ ।
नेतृत्वमा पुग्नु, आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नु भन्दा पनि त्यस्का लागि विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु र सदस्य चिकित्सकहरुको मन जित्नु महत्वपूर्ण हुँदोरहेछ । चुनावी एजेन्डा, प्रतिबद्धता के साँच्चै पुरा हुन्छन् त ? अनि कसले पुरा गर्लान् त ? अधिकांश चिकित्सकहरुको मनमा यस्ता प्रश्नहरु आउने गर्छन् । चुनाव अगाडि मिठा सपना बाँड्ने अनि चुनाव पछि सबै बिर्सिने पुरानै राजनीतिक संस्कारले चिकित्सक संघलाई पनि मुछ्ने पो हो कि भन्ने धेरैलाई हुन सक्छ । कति चिकित्सकहरुले २ समूहबीच सँधै वैचारिक द्वन्द रहने हो कि भन्ने चिन्ता भएको पनि पाएँ । तर यो एउटा पेशागत संस्था भएकाले र सबैको उद्देश्य नै पेशागत हकहित रहेकाले त्यस्तो द्वन्द नहोला ।
चिकित्सक संघका लागि चुनौतिहरु धेरै छन् । २०४६ साल होस् २०६२ को जनआन्दोलन प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकारका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका संघ अहिले चिकित्सकहरु कै हतहितका लागि पनि अपेक्षित कार्य कुशलता देखाउन असमर्थ भई रहेको वर्तमान अवस्थामा यो कम्तिमा २६ जना कोशि शाखाबाट सक्रिय देखिनु पनि राम्रो पक्ष हो । एकातिर चिकित्सक पनि बेरोजगार भएको छ, अर्कोतिर सरकारी अस्पतालमा र स्थानीय निकायहरुमा चिकित्सक पुगेको छैन । यस अवस्थामा मध्यस्थता गरिदिनु पर्ने संघ मौन देखिनु, कोभिड महामारीमा फ्रन्टलाईनमा रहेका चिकित्सकहरुलाई भत्ता त कहाँ हो कहाँ सम्मान र केही संस्थामा पाउनुपर्ने तलब सुबिधा समेत रोकिएका कुराहरु बाहिर आउँदा समेत संघ मौन भएको देख्दा संघको सक्रियता चुनावमा मात्रै हुने त हैन भन्ने धेरैलाई लागेको हुन सक्छ । तर अबको नेतृत्व त्यस्तो पक्कै हुँदैन । विगतमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका कतिपय चिकित्सक साथीहरु मैदानमा हुनुहुन्छ । तर, माथि उल्लेखित कतिपय चिकित्सकका समस्या समाधानमा उहाँहरुको पहल पुगेन । त्यसखालको पहल र प्रयत्न गर्नका लागि डा.कैलाश श्रेष्ठलगायतको हाम्रो टीम सदैब प्रतिबद्ध हुनेछ ।
सदस्य पदका लागि संघको आजिवन सदस्य भएको कम्तीमा ४ बर्ष र पदाधिकारी हुन ७ बर्ष पुगेको हुनुपर्ने नियमले संघमा उम्मेदवारी दिने चिकित्सकहरु सबै परिचित रहेको स्पष्ट छ । परिचय नामले मात्रै हुँदैन, काम र बिचारले पनि हुन्छन् । हाम्रो टिमका सबै उम्मेदवारहरु परिचित छन् र आ–आफ्नै बिशेषता र क्षमता बोकेका पनि छन् । यस शाखाका भोटर चिकित्सकहरुले राम्रो विश्लेषण गरेर हाम्रो टिमलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु ।